Button ကင်မရာများ စမ်းသပ်မှုတွင်လိမ်လည်ခြင်းအတွက်နားကြပ်၊ ကင်မရာနှင့်နာရီကိုဝယ်ပါ - eXamYo.com
အဆိုပါ eXamYo Cam ကင်မရာခလုတ် သင့်အတွက်အသုံးပြုရန်ပြီးပြည့်စုံသောဖြည့်စွက်သည် စာမေးပွဲများ သင့်ရဲ့နဲ့အတူ eXamYo မိုက်ခရိုနားကြပ်.
အဲဒါတစ်ခုတည်းပဲ မိုက်ခရိုကင်မရာ သငျသညျထုတ်လွှင့်ဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ကမ္ဘာကြီးထဲမှာ ဗီဒီယို ကြိုးမဲ့ အစစ်အမှန်အချိန်အတွက် ဖြတ်. ဝိုင်ဖိုင်၊ 3G သို့မဟုတ် 4G. ကြိုးတွေမရှိ၊ ဆင်းမ်ကဒ်မရှိပါ, အပိုဆောင်းကုန်ကျစရိတ်မရှိပါ။ မည်သည့်စက်နှင့်မဆိုသဟဇာတဖြစ် - ကွန်ပျူတာများ (Windows, Macမိုဘိုင်းနှင့်တက်ဘလက်များAndroid, iOS) နှင့်တစ် ဦး unbeatable စျေးနှုန်းမှာ!
စာမေးပွဲများတွင်ကူးယူခြင်း ပိုမိုလွယ်ကူခဲ့ဘယ်တော့မှသိရသည် eXamYo Cam မင်းရဲ့ပုံတွေကိုပြနိုင်တယ် စာမေးပွဲ သင့်ရဲ့လက်ထောက်ကိုသူတို့ကိုပြto္ဌာန်းစရာမလိုပဲ၊ အန္တိမခုတ်!
eXamYo Cam ခလုတ်ကင်မရာ
အကောင်းဆုံး စာမေးပွဲများအတွက်ကင်မရာ စျေးကွက်၏။
စာမေးပွဲများအတွက်ကူးယူပါ စုစုပေါင်းလုံခြုံရေးနှင့်အတူ အသေးဆုံးခလုတ်ကင်မရာ.
တိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုလွှင့်ထုတ် သင့်ရဲ့လက်ထောက်မှစာမေးပွဲမေးခွန်းများကိုအတူ အကွာအဝေးကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ.
တစ်ခုတည်း 100% ကြိုးမဲ့ မိုက်ခရိုကင်မရာ
နှင့် eXamYo Cam ခလုတ်ကင်မရာ သင်လုပ်နိုင်သည် စာမေးပွဲအောင်ပါ အလွယ်တကူပဲ!